Izicathulo ezinhle nemilenze emihle zidinga ubucwebe ngezinyawo
Imihlobiso yezinyawo | Shoes fashion
Ama-anklets akufanele abe ama-catchers
Tattoos ezidwetshiwe njengezicwebe ezinyaweni
Lapho amazinga okushisa afudumele ancoma izicathulo ezinhle njengezicathulo zokuzikhethela ezinyaweni zakho, ngakho-ke kufana nonyaka wonke: bonisa izinyawo zakho! Futhi sinikeza amathiphu wezingubo ze-chic ezinyaweni.
Izindwangu zezinyawo - izinyawo ezilungiswe kahle njengezicathulo ze-chic
Noma ubani manje ongakwazi ukukhanyisa izinzwane ezihlotshiswe kahle futhi eziguqulwayo futhi eze nge-peach elula futhi eyinkimbinkimbi ye-peach, ngokucacile inzuzo. Zombili izimonyo futhi zinobuhle
Kodwa imfashini yendlela yokusebenza emhlabathini ayifuni ukuphelelwa izinyawo ezenzakalelayo nezesitayela nge-polish ehambisana ne-nails noma isihlangu se-Manitu.
Ngoba yiziphi izandla ezinhle ezilungile, izinyawo ezincane ezishibhile: izicathulo ze-chic!
Kodwa kufanele kube yiziphi izinwele ezinyaweni? Futhi yini okumelwe ikhokhwe kulo mkhuba omuhle wehlobo?
Ukukhanya okwesibhakabhaka selanga kuqhubeka kubangela isisindo ngesithonjana ngasinye sesitayela. Leli chungechunge likhona emlenzeni futhi likhanyisa iso lombukeli onomusa.
Uma ukulingana okuhambisanayo okungahambisani nakho kungathinteki, u-Eva omncane wenza konke okulungile. Kodwa-ke, abanye abaqalayo abaqalayo abacabangi ukuthi umjikelezo we-ankle ohlotshisiwe uhlobene kakhulu nokuhlukunyezwa.
I-Anklet njengengcwecwe yezinyawo
Kulula ukubona: uma udonsa izinyosi ngokusemandleni akho, i-ankle ithatha ubukhulu bayo. Uma uvumela ukuhamba ngezinyawo futhi, ubona umehluko ocacile.
Lokhu kulandela: I-anklet ingase ingagcini ngisho noma unyawo luvame kakhulu. Futhi lokhu kusho ukuthi ubude be-anklet kufanele buqunywe yi-circumference ye-ankle esimweni esibucayi. Uma kungenjalo, izesekeli zizoba ngokushesha.
Izinzwane ezihlotshiswe kahle zinomdlalo ofanayo wezemidlalo we-wrestling njengeminwe eminwe. Kodwa benza ezinye izidingo ezicwebezelweni ngoba izimo zesimo sengqondo azifani nazo zonke izigaba.
Ngenxa yalesi sizathu unamathele wesitimela esinezintambo eziguquguqukayo okunconywa ngokuphelele ngezinyawo. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashwe ukunakekelwa ukuqinisekisa ukuthi ukuklanywa kwamasongo ezinzwane kunamaphethelo abukhali namaphoyinti, noma ama-reliefs aphansi. Ngoba lapha kudala ukulimala okungokoqobo okulimazayo okugwemekayo.
Izindwangu zezinyawo ezingenayo izihlahla futhi zihlala kuphela ehlobo? Ayikho inkinga ngama-tattoos angekho unomphela. Nalapha futhi, nansi izandla zika-godfather. Ubani onesithakazelo kule fomu yokuhleka kwezinyawo kumele ku-Google ku-Mehndi. Ngoba uHenna unayo endaweni yonyawo ngokwayo!
Izinyawo ezinhle, ubucwebe ngabanye kuhlale kuhle ukubhekana nazo. Akunandaba ukuthi zenziwe ngegolide, isiliva noma imifino yemifino. Kukhona njalo into eqhubekayo.
Izinduna zabesifazane | imfashini
Bonisa izinyawo zakho amanothi kanye nombhalo
Ukudinga - Imfihlo eyimfihlo
Sebenzisa amathiphu omndeni
Amathuluzi abaluleke kunawo wonke emndenini
Amathayimithebula esikoleni sokubala
Ukuvuselela - imibono yefulethini
Indaba yezinganekwane Grimm - The Bremen ...